Wasiirka Socdaalka oo loogu baaqay in uu iscasilo | Somaliska
Wasiirka socdaalka Sweden Tobias Billström ayay soo wajahday eedeyn kulul ka dib markii [caption id="attachment_1253" align="alignright" width="300" caption="Wasiirka Socdaalka Tobias Billström"] [/caption] hadal sir oo uu u sheegay safaarada Maraykanka la soo bandhigay. Wasiirka Socdaalka ayaa la sheegay in sanadkii 2007 isaga iyo Wasiirka arimaha dibeda Sweden ay kala hadleen yareynta qaxootiga Ciraaqiyiinta ka dib markii ay sheegeen in qalalaase ay keenaan dadkaas Sweden. Hadalkooda ayaa lagu micneeyay cunsuriyad ka dhan ah Ciraaqiyiinta kana soo horjeeda sharciga Magangalyadoonka Sweden iyadoo xubno fara badan oo ka tirsan siyaasiyiinta Sweden ay cambaareeyeen hadalkaas. Wasiirka Socdaalka ayaa maalmihii la soo dhaafay diiday in uu faahfaahin ka bixiyo hadalkiisa asagoo Axadii sheegay in uusan dhihin wax ka soo horjeeda sharciga magangalyadoonka Sweden. Hogaamiyaha xisbiga Social Demokraterna Mona Sahlin ayaa ku tilmaantay sirta Wasiirada mid fadeexad ah ayadoo sheegtay in loo baahanyahay in ay cadeeyaan hadalkooda. Gudoomiyaha Xisbiga Liberalka qeybtiisa dhalinyarada oo ay xulufo yihiin xisbiga talada haya ayaa ugu baaqay Wasiirka Socdaalka in uu is casilo Tobias Billström. Websiteka Wikileaks ayaa caalamka ka qaylisiiyay ka dib markii ay bilaabeen dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay daabacaada 250,000 dokumentiyo sir ah oo ay leedahay safaaradaha maraykanka ee ku kala yaal caalamka. Ayadoo daabacaadaas ay keentay in wadamo badan ceeb ka raacdo hadala qarsoon ee ay maraykanka u sheegaan.
Wasiirka socdaalka Sweden Tobias Billström ayay soo wajahday eedeyn kulul ka dib markii
Wasiirka Socdaalka Tobias Billström
hadal sir oo uu u sheegay safaarada Maraykanka la soo bandhigay. Wasiirka Socdaalka ayaa la sheegay in sanadkii 2007 isaga iyo Wasiirka arimaha dibeda Sweden ay kala hadleen yareynta qaxootiga Ciraaqiyiinta ka dib markii ay sheegeen in qalalaase ay keenaan dadkaas Sweden.
Hadalkooda ayaa lagu micneeyay cunsuriyad ka dhan ah Ciraaqiyiinta kana soo horjeeda sharciga Magangalyadoonka Sweden iyadoo xubno fara badan oo ka tirsan siyaasiyiinta Sweden ay cambaareeyeen hadalkaas. Wasiirka Socdaalka ayaa maalmihii la soo dhaafay diiday in uu faahfaahin ka bixiyo hadalkiisa asagoo Axadii sheegay in uusan dhihin wax ka soo horjeeda sharciga magangalyadoonka Sweden.
Hogaamiyaha xisbiga Social Demokraterna Mona Sahlin ayaa ku tilmaantay sirta Wasiirada mid fadeexad ah ayadoo sheegtay in loo baahanyahay in ay cadeeyaan hadalkooda.
Gudoomiyaha Xisbiga Liberalka qeybtiisa dhalinyarada oo ay xulufo yihiin xisbiga talada haya ayaa ugu baaqay Wasiirka Socdaalka in uu is casilo Tobias Billström.
Websiteka Wikileaks ayaa caalamka ka qaylisiiyay ka dib markii ay bilaabeen dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay daabacaada 250,000 dokumentiyo sir ah oo ay leedahay safaaradaha maraykanka ee ku kala yaal caalamka. Ayadoo daabacaadaas ay keentay in wadamo badan ceeb ka raacdo hadala qarsoon ee ay maraykanka u sheegaan.
cilmi xaji says:
walal waxan ka codsanaya aqbarta ka hadleysa wasirka arimaha dibada ma iigu so turjumi karta af iswidhish please.
Walaal cilmi warbixinta ku saabsan Wasiirka socdaalka iyo kan arimaha dibada beryahaan dhan waxay ka socotay warbaahinta sweden…SR ayaad ka heli kartaa warbixintaas oo Swedish ah http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4309648
asc, aniga waxana qabaaa websiteka wikileaks u caqabad ku yahay howlaha caalamka, wasiirkana haduu yiri hadalkaa waa in la helaa cadeymo sax ah oo muujinayao hadalkiisa , mida kale wadanka iyo maamulkis awuxuu xaq uleeyahay inuu ilaaliyo amakaiisa iyo waxii caqabad ku ah , taasna maha wax xun haduu yiri xataaaa . lkn wa ain la cadeeyaaaa
mahadsanid bye diyeeshe
Wiklis Waa Wabsed raayo saasaala rabaa ha fashiloo
sirta ay noo duug duugaayan run sheg waaa ceb sheeg.
tabias usna maha aw hada fadha ma fadhi doono aduunyada wa agarangar wax kheere Allaha keeno